Waa maxay jasiirad: astaamaha, qaab dhismeedka iyo noocyada | Saadaasha Shabakadda
Waa maxay jasiirad
Jarmal Portillo | 09/06/2021 10:00 | Geology
Markaan ka hadleyno qaababka kala duwan ee jir ahaaneed ee jira, waxaan aragnaa in jasiiraduhu ay ka mid yihiin kuwa ugu soo jiidashada badan dhinaca dalxiiska. Taasina waa in jasiiraduhu ay hayaan sifooyin gaar ah iyo nidaamyo deegaan oo runtii mudan in la ogaado. Si kastaba ha noqotee, qof kastaa si sax ah uma yaqaan waa maxay jasiirad. Waxay leeyihiin astaamo juqraafiyeed iyo shuruudo gaar ah waa in la buuxiyaa si taas loo sameeyo.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa waxa ay tahay jasiirad, astaamaheeda iyo asal ahaan.
1 Waa maxay jasiirad
2 Waa maxay jasiirad: qaabeyn
3 Noocyada jasiiradaha
4 Jasiirado macmal ah
Jasiirad waa dhul gebi ahaanba ay hareereeyeen biyo, kaas oo ka yar dhul weynaha. Markii dhowr jasiiradood ay isu dhowyihiin, waxaa si wadajir ah loogu magacaabaa jasiirado.
Waxaa jira dhowr jasiiradood sida ay u muuqdaan, iyo cabbirradooda iyo qaababkooda kala duwan. Kuwa ugu waaweyni waa Greenland, Madagascar, New Guinea, Borneo, Sumatra iyo Baffin Island, halka kuwa ugu yar ay si aan xad lahayn u tiro badan yihiin maxaa yeelay iyagu ma kala baahsana oo keliya badweynta dhexdeeda, laakiin sidoo kale harooyinka iyo xitaa wabiyada. Jasiiraddani badiyaa waa qaybo yaryar, oo badiyaa aan lahayn nolosha aadanaha, laakiin leh dhir iyo xayawaano kale.
Jasiiradaha yar-yar waxaa loo yaqaannaa jasiirado, badiyaa dad la'aan, laakiin leh dhir iyo xayawaan. Jasiiradaha ayaa had iyo jeer lala xiriiriyaa fikradda janada. Waxay sidoo kale la xiriiraan kalinimada iyo jiritaanka nolol bikro ah. Aad ayey muhiim ugu ahaayeen dadka. Qaar badan oo ka mid ah waddamadu waxay degeen hal ama dhowr jasiiradood waxayna lahaan karaan xiriir dhaqaale oo aad u sarreeya sida uu yahay Japan. Japan waa ummad lagu rakibay jasiirado ka mid ah Badweynta Baasifiga maantana waxay u taagan tahay farshaxankeeda iyo dhaqaalaheeda. Horumarka tikniyoolajiyadeed ee Japan ayaa horumarey iyada oo aan wax dhibaato ah laga qabin inkasta oo uu wadanka ka dhigay jasiirad.
Si loo ogaado si qoto dheer waxa ay tahay jasiirad, waxaan arki doonnaa wax ka yar ama ka yar qeexitaanka la bixiyay iyadoo loo eegayo Qiimaynta Nidaamyada Millennium. Kuwani waa dhul go'doon ah oo ay ku hareeraysan yihiin biyo, oo ay ku badan yihiin lagana soocay qaarad ugu yaraan 2 kilomitir. Cabirkiisu waa inuu u dhigmaa ama ka weynaadaa 0.15 kiiloomitir. Waa in maanka lagu hayaa in jasiirado badan yihiin goobo buuxa oo ay ka buuxaan kala duwanaansho kaladuwanaansho iyo noocyo dhammaad leh. Nooc endemic waa mid u gaar ah nidaamka deegaanka oo aan ka jiri karin meel kale maadaama ay u baahan tahay shuruudahan si ay u noolaato. Tusaale ahaan, lemur waa xayawaan laga helo kaliya Madagascar, jasiirad.
Waa maxay jasiirad: qaabeyn
Markaan ogaano waxa ay tahay jasiirad, waxaan isku dayi doonaa inaan sharaxno qaabkooda. Jasiiraduhu way jireen maxaa yeelay saxanka tectonics ee meeraheenna ayaa ku jira dhaqdhaqaaq joogto ah. Waxaan xasuusan nahay in meeraha dhulku leeyahay sanduuqyo badan oo ka kooban qalab kala duwan. Gogosha dhulku waxay ka kooban tahay hirar kala-qaadashada sababtoo ah kala duwanaanta cufnaanta qalabka tanina waxay keentaa in qolofka qaaraddu isbedelo. Qolofkani wuxuu ka kooban yahay taarikada tectonic waxayna si isdaba joog ah u sii socdaan wakhti ka dib.
Jasiiraduhu sidoo kale waxay ku dhaqaaqaan taarikada tectonic. Mararka qaarkood way isu yimaadaan mararka kalena way kala baxaan. Sidaa darteed, waxay u muuqan karaan koorsada malaayiin sano oo badan iyadoo ay sabab u tahay dhacdooyinka cilmiga dhulka sida fulkaanaha qarxa fulkaanaha badda. Waxaa jira dhowr siyaabood oo jasiirad lagu abuuri karo iyada oo tan laga bilaabayo noocyo kala duwan.
Waxaa jira noocyo jasiirado kala duwan ah iyadoo loo eegayo astaamahooda. Jasiiradahaasi waxay u qaybsan yihiin laba nooc oo waaweyn kuwaas oo kala ah qaarad iyo badweyn. Aan aragno astaamaha midkastoo ka mid ah:
Jasiiradaha Qaaradaha: Waxay ka tirsan yihiin shelf qaaradda. Inbadan waxay kamid ahaayeen qaarada, laakiin waa la go'doomiyay ka dib markii ay sare u kacday heerka badda. Noocani waa waxa loogu yeero "jasiiradda mawjadaha", oo dhacda marka mowjad badani ay daboosho qaybta dhulka isku xira aag iyo aag kale. Sidaa darteed, qayb ka mid ah waxaa ku xeeran biyo. Jasiiradaha xayndaabku waxay ka kooban yihiin qaybo dhul ah oo barbar socda xeebta, in badan oo ka mid ahna ay yihiin qayb ka mid ah shelf qaaradda. Waxay noqon karaan natiijada mawjadaha badda ee riixaya ciidda iyo jiifka, ama xitaa waxyaabaha dhalaalaya xilligii barafka ee ugu dambeeyay ee sababay heerka sare ee badda. Tusaalooyinka jasiiradaha noocan ah waa Greenland iyo Madagascar.
Jasiiradaha Badweynta: Iyagu kama tirsana shelf shelf ee qaaradda. Qaarkood sidoo kale waxaa loogu yeeraa jasiiradaha fulkaanaha maxaa yeelay waxaa sameeya nooc kasta oo ka mid ah qaraxyada folkaanaha ee ka hooseeya. Jasiiradaha ku yaal badweynta badiyaa waxay ku yaalliin aagag hoosaadyo oo hal saxan ka hooseeyo mid kale, in kasta oo ay sidoo kale ka samaysan karaan baro kulul. Xaaladdan oo kale, saxanka ayaa ka sarreeya meeshaas, maaddaama magma ay kor u socoto, taas oo keeneysa in qolofka dhulka uu kor u kaco.
Jasiiradaha kale ee ku teedsan badweynta ayaa ka kacay dhaqdhaqaaqa taarikada tectonic markii ay kor uga kaceen heerka badda. Mararka qaarkood kooxo waawayn oo dhuxul ah ayaa sameeya dhagaxaan weyn oo dhagax weyn leh. Marka lafaha kalsiyum ee xayawaankani (oo ka kooban inta badan kaalshiyam kaarboonayt) ay isu uruursadaan si aan isku dheelitirnayn oo ay uga muuqdaan heerka badda, waxay samaystaan ​​jasiirad meeraha ah. Dabcan, qalab kale ayaa lagu daraa lafaha.
Haddii lafuhu ku soo ururaan hareeraha jasiiradaha badweynta (badanaa volcanoes), waqti ka dib, dhulka ku yaal bartamaha ayaa hoos u dhacaya oo uu ku daboolayo biyo si uu u sameeyo lagoon, natiijadu waa atoll. Tusaale jasiiradda noocan ah waxaa ka mid ah Jasiiradaha Hawaii iyo Maldives.
Jasiirado macmal ah
Aadanaha wuxuu ku guuleystey inuu abuuro jasiirado macmal ah oo ku saleysan farsamada casriga ah. Kaabbadaha lagu sameeyay qalabka macdanta ah iyo shamiintooyinka ayaa u adeegi kara inay noqdaan jilid ka mid ah shelf qaaradda. Si kastaba ha noqotee, nuxurka jasiiraddu weligeed isku mid ma noqon doonto xitaa haddii bini aadamku isku dayo inuu ku daydo.
Sida aad u aragto, jasiiraduhu waa kuwo aad u xiiso badan marka laga eego aragtida juqraafi iyo bayooloji. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto waxa ay tahay jasiirad iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Waa maxay jasiirad